အရင်က A တန်းက လူတွေပဲ ဆရာဝန်တွေ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေ၊ စစ်ဗိုလ်ကြီးတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်ခဲ့တာ... - Zet Star
အရင်က A တန်းက လူတွေပဲ ဆရာဝန်တွေ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေ၊ စစ်ဗိုလ်ကြီးတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်ခဲ့တာ…
ငယ်ငယ်တုန်းက ခွဲခြားခံရတာများ ပြောပါတယ် A တန်းက လူတွေဆို ရွှေခုံကြီးတွေမှာထိုင် ရွှေမှုန်တွေစားပြီး စာသင်ရတယ်လို့ကို ထင်မိတာ…
ဆရာမတွေက “Aတန်းက လူတွေက တော်တယ်” “Aတန်းက လူတွေက လက်ရေးလှတယ်” “Aတန်းက လူတွေက ယဉ်ကျေးတယ်”လို့ အတန်းတိုင်းမှာ ပြောကြတာကိုး…. ကိုယ်တွေ E တန်း F တန်း G တန်း H တန်းကလူတွေဆို ဒုက္ခသည်စခန်းက နိုင်ငံမဲ့တွေလိုလို ခိုးဆိုးလုနှိုက် အလောင်းအလျာလေးတွေလိုလို ဂျိုကျိုးနားရွက်ပဲ့တွေ စုပုံခြံခတ်ထားသလိုလို အဲ့လိုမြင်ကြတာ….
Aတန်းက ဘယ်သူက အဆင့် ၁ ရတယ်ဆို သွားတောင်ကြည့်ယူရတယ် (မမြင်ဖူးလို့) A တန်းက အဆင့်၁ ၂ ၃ ဆို ဆယ်လီဆိုပြီး သွားကြည့်ရတာ ဆယ်လီဖြစ်ချက်က အခုခေတ် မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုသနားတယ်…
တခြားအတန်းကလူတွေဘယ်လောက်တော်တော် Aတန်းကလူတွေကို မမီတာ…အဲ့လို…. ကိုယ်တွေ အနောက်ပိုင်းကျတဲ့ အတန်းတွေက ဘာမိုတီမှ မရှိတာ…. နောက်ပိုင်းအခန်းတွေမှာ အဆင့် ၁ ရလည်း မပျော်နိုင်တဲ့ဘဝ (လူရာမဝင်ဘူး ပြောပါတော့)
အရင်ကတော့ ထင်မိတာပေါ့ Aတန်းကလူတွေကပဲ ဆရာဝန်ကြီးတွေ အင်ဂျင်နီယာကြီးတွေ စစ်ဗိုလ်ကြီးတွေဖြစ်လိမ့်မယ် သေချာပေါက်ချမ်းသာလိမ့်မယ် ကျိန်းသေပေါက် ပညာရှင်ကြီးတွေဖြစ်လိမ့်မယ် သူဌေးကြီးတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်မိတယ်…. Aတန်းကလူတွေကိုပဲ အကုန်လုံးက”လူ”လို့သက်မှတ်ကြတာကိုး…
Aတန်းနားသွားရင်ကို အရောင်တွေလက်နေသလိုလို ခွန်အားတွေရသွားသလိုလို အားကျစိတ်တွေပေါ်လာသလိုလို ဗိုက်နာလာသလိုလို ရှူးပေါက်ချင်လာသလိုလိုကြီး အဲ့လောက်ပါဝါကြီးတာ… ခုတော့လည်း Aတန်းကလူတွေလည်း မြဲတဲ့လူကမြဲ ကြဲတဲ့လူကကြဲ သူဌေးဖြစ်တဲ့လူကဖြစ် ခွေးဖြစ်တဲ့လူကဖြစ် H တန်း I တန်းက လူတွေလည်း ကမ္ဘာပတ်တဲ့ကောင်ကပတ် ခွက်ဆွဲတဲ့ကောင်ကဆွဲနဲ့…..
လောကကြီးက မျှမျှတတခွဲထုတ်ပေးလိုက်တာ (ဒါတောင် တချို့က အခုထိ ငါက Aတန်းကဟဲ့ ဆိုပြီးလုပ်နေကြတုန်း) ခုတော့ ကျောင်းတချို့မှာ Aတန်း Bတန်းစနစ်မရှိတော့ဘူးကြားတယ် ဝမ်းသာပါတယ် အတန်းတွေကိုလည်း မခွဲခြားတော့ဘူးကြားတယ် စာမေးပွဲတွေလည်း မရှိတော့ဘူးကြားတယ် တတ်မြောက်အောင်သင်ကြားဖို့ပဲ ဦးစားပေးတော့တယ်ကြားတယ်
ကြိုက်တယ် ဝမ်းသာတယ် ကြိုဆိုတယ် “A တန်းသည်သာ ပဓာန”ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ ခင်ဗျားတို့ရော တွေ့မိသေးလား Aတန်းကလူတွေ…..
Min Yel Kyaw Swar
← လူကောင်းသွားနေရင်တောင် ရောဂါရသွားမယ့် ရွှေပြည်သာက Q စင်တာ အခြေအနေ
ဧရာကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာ (B) တွင် မနက်ဖြန်မှ စပြီး လူနာများ လက်ခံပြီ →